Iye zvino yavapo Kali Linux 2016.2, yakachengeteka kuchengetedzwa kugoverwa | Linux Vakapindwa muropa
Iye zvino yavapo Kali Linux 2016.2, yakachengeteka yekuparadzira yekuparadzira
Mumaawa ekupedzisira vagadziri veKali Linux vakatiunzira zvishamiso zvakati wandei, kunyanya kune vedu vanofarira kugoverwa uku. Haisi chete iyo yakagadziridzwa yekumisikidza mufananidzo yakaburitswa iyo yakatumidzwa zita KaliLinux 2016.2 asi zvichachinja iyo yekuburitsa uye yekuvandudza system pamwe neshanduro idzo dzino kugoverwa dzichava nadzo. Asi isu tinoenda muzvikamu.
Kali Linux 2016.2 ndeye yakavandudzwa vhezheni iyo inosunungurwa iine nguva yakaringana ichienzaniswa neye yapfuura vhezheni saka isu tichawana akati wandei akagadziridzwa ekupinda mapakeji uye maturusi, chinhu chiri mumunda umo vashandisi vanofamba, zvinodikanwa.
Uye zvakare, kubva zvino zvichienda mberi, tichava neshanduro dzakasiyana dzinozoenderana nematafura akakurumbira, saka isu tichawana vhezheni ine KDE, Gnome, MATE, Xfce, Kujekerwa uye LXDE. Ma desktop akazara anoenderana nechero komputa asi anofanirwa kunge ari makumi matanhatu neshanu sezvo paine chete mifananidzo yekumisikidza yemapuratifomu aya.
Kali Linux 2016.2 inopa yekuvandudzwa kweakawanda ekuchengetedza mapakeji asi zvakare matsva ematafura
Dzimwe nhau dzakaunzwa neKali Linux timu ndeye purogiramu nyowani yekuvandudzwa uye shanduro dzinozotanga vhiki rino, mairi muchave nekuvandudzwa neshanduro nyowani dzekuparadzira nematurusi matsva kana mamwe mabasa akachengeteka anobvumidza mushandisi kushanda munzvimbo yakachengeteka kuti aite basa ravo, chimwe chinhu chisingangotsvage nevanotsika chete.
Chero zvazvingaitika, Kali Linux inogadziridzwa nenzira inonakidza sezvo ichipa kugadzikana kweDebian neBacktrack asi ne software yazvino pamusika wekuchengetedza. Zvino, kuiswa kwezvishandiso nyowani hakusi kwakawanda, kunyangwe iri shoma pane iya yekumwe kuchengetedzwa kugoverwa senge Nhema Arch Linux, Iyo ine inopfuura 1500 yekupinda uye ekuchengetedza maturusi. Asi izvo zvinogona kugadziriswa Haufungi here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Iye zvino yavapo Kali Linux 2016.2, yakachengeteka yekuparadzira yekuparadzira
Tichafanirwa kuzviedza !!
Pindura kuna miguelghz
Gabriel Reyes akadaro
Nhau dzakanaka dzeiyo SL
Pindura kuna Gabriel Reyes
wow iyi saiti zvakare
Ndinoda iyo vhezheni pamwe nekujekeswa
Noredine bahri akadaro
ehe ndinoifarira uye ini ndawana yenyaya nhaurwa nezvazvo mune iyi link
Pindura Noredine Bahri
Maitiro ekugadzira mitambo yemitambo pane yako GNU Linux uye Android kugovera
TENS: iyo GNU / Linux kugovera kunoshandiswa neUnited States Air Force